Simona Halep nirohotra tamin'i Ms Bennick ny Championship Dubai -
Dubai Championships: Simona Halep lavo amin'i Belinda Bencic
Ny isa roa voalohany dia Simona H milaza fa reraka ny vatany noho ny nandreseny an'i Belinda Bencic, Soisa, tany amin'ny lalao fandaharana Dubai, saingy nahomby.
Bencic, izay namonjy teboka maromaro talohan'ny nidarohana an'i Aryna Sabalenka tamin'ny lalao tennis teo aloha, dia naneho indray ny ady 4-6 6-4 6-2.
Ny Halep an'i Romania, izay ankehitriny 27, dia efa nanapaka ny fepetra napetraky ny 21 taona fito.
"Tsy afaka manompo tsara aho satria nahatsapa ny olana nahazoako an'i Achilles, ary nihetsiketsika aho, saingy tsy misy fialantsiny", hoy i Halep nanonona.
Nanao lalao siramamy izy nandritra ny efa-polo alina, raha nanolo-tena an'i Romania tao amin'ny Cup ary nahatratra ny farany farany an'i Qatar.
"Tsapan'ny vatana fa reraka no nahatsapako fa tsy ampy ny fandresena.
Rehefa tsy nahomby ny hamadika ny teboka iray handehanana 3-1 mialoha, ary ny iray hafa amin'ny lalao sivy minitra ho an'ny tarika 4-2, ny tontolon'ny tontolon'ny serasera teo aloha dia very ny fifampitokisana tamin'ny fahasivy tamin'ny famonoana an'i MsBencic dia nanolotra mora foana ho an'ny andiany faharoa.
Izany dia nahatonga an'i Bencic hanohy hitombo amin'ny fahatokisany, ka hifehy ny hevitra
Ary koa, ny Australista Open finalist Ms Petra Kvitova dia nahatratra ny semi-finals tamin'ny fandresena azony tamin'ny Viktoria Kuzmova ao Slovakia.
Ny tompondakan'i Wimbledon roa fotoana, dia novonoina fanindroany, nandroso tamin'ny fandresena 6-4 6-0, nametraka ny lalao efatra farany tamin'ny Taipei an'ny Taiwanais Hsieh Su-Wei.
Previous PostPrevious Central Park any an-tanànan'i Meraas
Next PostManaraka Sheikh Hamdan nankasitraka ny drafitra hanodihana an'i Dubai uni ho faritra malalaka